ပဲခူး(အနောက်ပိုင်း) – Page4– ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ပဲခူးခရိုင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ မြန်မာ့ရိုးရာထမနဲထိုးပြိုင်ပွဲကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး မှကြီးမှူးကျင်းပသော ပဲခူးခရိုင် ပြည်ခိုင်ဖြိူးပါတီ ထမနဲထိုးပြိုင်ပွဲအား ယနေ့နံနက် ၁၁ နာရီအချိန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ပြီး ခရိုင်အတွင်းရှိမြို့နယ်များဖြစ်သည့် ပဲခူးမြို့နယ် ၊ ညောင်လေးပင်မြို့နယ် ၊ ဝေါမြို့နယ် ၊ ကျောက်တံခါးမြို့နယ် ၊ သနပ်ပင်မြို့နယ် ၊ က၀မြို့နယ် ၊ ဒိုက်ဦးမြို့နယ် ၊ ရွှေကျင်မြို့နယ် တို့မှ ပါတီဝင်များဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပါသည်။
ပြည်ခရိုင်၊ အမျိုးသမီးရေးရာ တွေ့ဆုံပွဲအခန်းအနားကိုဗဟိုအတွင်းရေးမှူးဒေါက်တာဒေါ်စန်းစန်းနွယ်၊တိုင်းပါတီဥက္ကဌဦးစောမော်ထွန်း၊ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးအောင်ချိုဦးနှင့် တိုင်းကော်မတီဝင်များ ပြည်ခရိုင်ကော်မတီဝင်များ(၆)မြို့နယ်ဥက္ကဌနှင့် ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ဝင်များစုံညီစွာတက်ရောက်ကြသည်။
ဗဟိုကော်မတီဝင် /တိုင်းဒေသကြီး ပါတီဒုတိယဥက္ကဌ မြို့နယ်နှင့်ရပ်ကွက် ကျေးရွာအုပ်စုများမှ တာဝန်ရှိ သူများနှင့် တွေ့ဆုံ
ပေါင်းတည် နိုဝင်ဘာ ၉
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဗဟိုကော်မတီဝင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်း ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးအောင်ချိုဦးသည် ဗဟိုကော်မ တီဝင်/တိုင်းဒေသကြီးပါတီ ကော်မတီဝင် ဒေါ်ထားထားနု၊ ပြည်ခရိုင်ပါတီဥက္ကဌ ဦးအောင်ဇော်ဌေး၊ ပြည်ခရိုင်ပါတီအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ဆွေဆွေသင်းနှင့် ခရိုင်ပါတီကော်မတီဝင်များ လိုက်ပါ၍ ပေါင်းတည်မြို့နယ် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရုံးသို့ ယမန်နေ့နံနက်ပိုင်းက ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါသည်။
ရေတာရှည်မြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ နိုင်ငံရေးစီမံခန့်ခွဲမှု (ဆင့်ပွား) ၂/ ၂၀၁၇ ဖွင့်လှစ်
ရေတာရှည်မြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ နိုင်ငံရေးစီမံခန့်ခွဲမှု (ဆင့်ပွား) သင်တန်း ၂/၂၀၁၇ ကို နိုင်ငံတော် သီချင်းဖြင့် (7-11-2017) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ နိုင်ငံရေးစီမံခန့်ခွဲမှု (ဆင့်ပွား) သင်တန်း ၂/၂၀၁၇ တွင် တောင်ငူခရိုင် ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်စိုးက သင်တန်းဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံရေးစီမံခန်ခွဲမှု(ဆင့်ပွား)သင်တန်း ၂/၂၀၁၇ သင်တန်းသား များအား နံနက်စာ ကောက်ညှင်းပေါင်း ငါးခြောက်မီးကင်နှင့် ပဲပြုတ် ၊ ကော်ဖီနှင့် မုန့်များဖြင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေး ခဲ့ပါသည်။
ဇီးကုန်းမြို့နယ် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ လူငယ် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး သင်တန်းဖွင့်လှစ်
ဇီးကုန်း နိုဝင်ဘာ ၄
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး သာယာဝတီခရိုင် ဇီးကုန်းမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ရုံးခန်းမဆောင်တွင် ယမန်နေ့ နံနက် ၉ နာရီက ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ကြီးမှူးကျင်းပသော လူငယ်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းကို တိုင်းဒေသကြီး ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ချိုဦး၊ တိုင်းဒေသကြီးပါတီကော်မတီဝင် ဒေါ်ထားထားနု၊ တိုင်းဒေသကြီးပါတီ ကော်မတီဝင် ဦးသန်းဇော်ထွန်းတို့ တက်ရောက် ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။
ရေတာရှည်မြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ တွေ့ဆုံပွဲကျင်းပပြုလုပ်
ရေတာရှည်မြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ တွေ့ဆုံပွဲကို (၂၅.၁၀.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ပါတီရုံး၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးလှသိန်း ၊ ဗဟိုကော်မတီဝင် ဒေါ်နီနီမာ ၊ ဌာနမှူး ဦးကျော်သူရ (ပညာရေးရာဌာန) တို့နှင့် တိုင်း ကော်မတီဝင် ၊ ခရိုင်ကော်မတီဝင်၊ မြို့နယ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌ အတွင်းရေးမှူးနှင့် ကော်မတီဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
လေးဆူဓာတ်ပျော်ရွှေဆံတော်စေတီတော်မြတ်ကြီး ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော်ဖွင့်ပွဲနှင့်ဆွမ်းဆန်စိမ်း လောင်းလှူပွဲကျင်းပ
ပဲခူးတိုက်းဒေသကြီး(အနောက်ပိုင်း) ပြည်မြို့ လေးဆူဓါတ်ပျော်ရွှေဆံတော်စေတီတော်မြတ်ကြီး ၂၆၀၆ နှစ်ပြည့် ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားနှင့် ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူပွဲအား ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ချိုဦးနှင့် တိုင်းပါတီကော်မတီဝင်များ ၊ ခရိုင် ပါတီကော်မတီဝင်များ ၊ မြို့နယ်ကော်မတီဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူပွဲတွင် လှူဖွယ် ပစ္စည်းများနှင့် ဆရာတော်သံဃာတော်များအား လောင်းလှူပူဇော်ခဲ့ပါသည်။
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်ပိုင်း) ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတိုင်းဒေသကြီး ပါတီကော်မတီဝင်ဦးကျော်မြင့်နှင့် ပန်းတောင်းမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ မြို့နယ်ပါတီကော်မတီ ဝင်တို့သည် (တော်သလင်းလပြည့်နေ့) ယမန်နေ့နံနက် ၈ နာရီက ပန်းတောင်းမြို့နယ် တောင်ဘို့ကြီးအုပ်စု တောင်ဘို့ကြီးကျေးရွာ ဓမ္မသုခကျောင်းတိုက် ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် အား ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းပြီး သီလခံယူတရားတော်နာယူခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် တိုင်းဒေသကြီး ပါတီကော်မတီဝင်ဦးကျော်မြင့်နှင့် မြို့နယ်ပါတီကော်မတီဝင်တို့ သည် ပန်းတောင်းမြို့နယ် တောင်ဘို့ကြီးအုပ်စု တောင်ဘို့ကြီးကျေးရွာ၊ ရေကျော်အုပ်စု ရောင်ကြီးကျေးရွာနှင့် ရေကျော်ကျေးရွာတို့ရှိ ဒေသခံရပ်မိရပ်ဖများ၊ ပါတီဝင်များတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ရေကျော်ကျေးရွာ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်အားသွားရောက်ဖူးမြော်ကာ အလှူငွေများ ဆည်းကပ် လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ သူရအောင် (ပြည်)
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်ပိုင်း) ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတိုင်းဒေသကြီး ပါတီကော်မတီဝင်ဦးကျော်မြင့်နှင့် ပန်းတောင်းမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ မြို့နယ်ပါတီ ကော်မတီ ဝင်တို့သည် (တော်သလင်းလပြည့်နေ့) ယမန်နေ့နံနက် ၈ နာရီက ပန်းတောင်းမြို့နယ် တောင်ဘို့ကြီးအုပ်စု တောင်ဘို့ကြီးကျေးရွာ ဓမ္မသုခကျောင်းတိုက် ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် အား ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းပြီး သီလခံယူတရားတော်နာယူခဲ့ကြသည်။
၂၁ . ၅ . ၂၀၁၇ ရက်​​နေ့တွင်​ ပဲခူးတိုင်း​ဒေသကြီး(အ​နောက်​ပိုင်း) ပြည်​​ထောင်​စုကြံ့ခိုင်​​​ရေးနှင့်​ဖွံ့ဖြိုး​ရေးပါတီ အမျိုးသမီး​ရေးရာ ​တွေ့ဆုံပွဲ အခမ်းအနားအား ပါတီဌာနချုပ်​ မှ အမျိုးသမီး​ရေးရာတာဝန်​ခံ ဗဟိုအတွင်း​ရေးမှူး ​ဒေါက်​တာ​ဒေါ်စန်းစန်းနွယ်​ ၊ ဗဟို​ကော်​မတီဝင်​ ​ဒေါ်ခင်​​ရွှေမြင့်​ တို့တက်​​ရောက်​​ဆွေး​နွေးခဲ့ကြပြီး ၄င်းအခမ်းအနားသို့ ပဲခူးတိုင်း​ဒေသကြီး ဒုတိယဥက္ကဌ ဦး​အောင်​ချိုဦး နှင့်​ တိုင်းပါတီ​ကော်​မတီဝင်​များ ၊ ခရိုင်​ ၊ မြို့နယ်​များမှ အမျိုးသမီး​ရေးရာတာဝန်​ခံများ ၊ ​ကောမတီဝင်​များ တက်​​ရောက်​ခဲ့ကြပါသည်​။ #Duwon